Valan-javaboaharim-pirenenan’ny Baie de Baly-Soalala: ny vahiny sahirana miaro, ny tera-tany sahirana mandoro | Région Boeny
Sivy andro no faharetan’ny afo, nanomboka ny zoma 05 desambra ary tsy maty raha tsy ny alin’ny 13 desambra vokatry ny filatsahan’ny orana. Ala maherin’ny 250 ha, firiariavan’ireo karazam-biby, sy anirian’ireo zava-maniry tsy fahita firy sy fitsaboana maro no levon’ny afo noho ny hetraketraky ny tsy mataho-tody tao amin’ny Valan-javaboaharim-pirenenan’ny Baie de Baly, Soalala, raha ny tatitra avy amin’ny MNP (Madagascar National Parks) any an-toerana.
25 taona no niadiana tamin’ny doro-tanety, ho fiarovana ity Valan-javaboaharin’ny Baie de Baly ity, tsy mbola may mihitsy io faritra io hoy ny taleny sady mpiandraikitra ny Tsingin’ny Namoroka, Atoa Andrianjara Amavatra Hervé.
Ny mampalahelo anefa dia ny ampitson’ny nanaterana ireo zana-tsokatra Angonoky roapolo tao Baly, ho fankalazana ny Hetsika Angonoky andiany faha-5 iny indrindra, ny 03 hatramin’ny 06 desambra lasa teo tao Soalala, no efa nanomboka nipoitra ny afo teny anivon’io valan-javaboahary io, raha vao niala teny ireo mpanatitra.
Nambaran’ity Talen’ny MNP Soalala ity fa tsy nisy maty hatreto na iray aza ireo sokatra Angonoky fa avotra avokoa. Ireo karazana bibilava sy tarondro kosa no maro matin’ny afo. Tsiahivina ihany fa 640 eo sisa no isan’ireo karazan-tsokatra tsy manam-paharoa ireo raha ny fanisana faran’ny Durrell.
Nandritra ny sivy andro, nifarimbona hatrany namono afo ireo rehetra tao an-toerana niaraka tamin’ny Durrell sy ny MNP, fa tsy nahatohitra. Ny famaizan’ireo alana volobe na Voloando eo amin’ny 200ha araka ny tatitra no nampanano-sarotra ny fidirana ny aty ala. Andanin’izay ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny rano.
Tsara fantarina hoy ny MNP fa ao Soalala irery ihany koa no ahitana ny Voloando, na perrierbambos madagascariensis, ary ny tsirin’izy ireny no foto-tsakafon’ireo Angonoky amin’ny asara rehefa avy natory nandritra ny main-tany izy ireo.
Eo am-panaovana fanadihadiana hamantarana ny nahavanon-doza ny Ben’ny ala any an-toerana araka ny tatitra ihany.
Baie de Baly-Soalala